अनुहार सुन्दर बनाउनका लागि उपयुक्त अौषधी एलोभेरा ! - Everest Dainik - News from Nepal
अनुहार सुन्दर बनाउनका लागि उपयुक्त अौषधी एलोभेरा !
याे पनि पढ्नुस होशियार ! सामान्य रुघाखोकीले फोक्सो ड्यामेज हुनसक्छ !
० यसमा १८ खालका धातु, १५ खालका एमिनो एसिड र १२ खालका भिटामिनहरु पाइन्छन् । यसको सेवनबाट धेरै पौष्टिक पदार्थहरु पाउन सकिन्छ।
याे पनि पढ्नुस थाहा पाइराखौं यस्तो अवस्थामा दही भुलेर नखानुहोस् !
० यसको काँडायुक्त पातहरुलाई काटेर रस निकाली विहान खाली पेटमा ३–४ चम्चा खाएमा शरीरमा दिनभर शक्ति बढ्छ र शरीर चुस्त दुरुस्त हुन्छ। यसले गर्मी पनि काट्छ ।
एलोभेरामा सुन्दर र स्वस्थ हुने धेरै प्रकारका राज लुकेका हुन्छन् । यसको प्रयोगले हाम्रो सम्पुर्ण शरीरमा नै परिवर्तन गर्छ । व्यस्त जिन्दगीबाट थोरै समय आफ्नो लागि छुट्याएर आफ्नो सौन्दर्य र स्वास्थको लागि एलोभेराको प्रयोग गर्नु भएमा यसले धेरै फाइदा गर्छ । एजेन्सीको सहयोगबाट